အသက် ၄၅ - ၂၂၀ ရက်၊ PIED နှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်းတို့ဖြင့်တိုးတက်မှုများ! ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုပိုကောင်းတဲ့ - Brain On Porn
အသက် ၄၅ - ၂၂၀ ရက်၊ PIED နှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်းတို့ဖြင့်တိုးတက်မှုများ! ဒါ့အပြင်လမ်းပိုမိုယုံကြည်မှု
ငါဒီအစီအစဉ်ကို ၇ လကျော်သွားပြီဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး။ လင်းနို့ကိုချက်ချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြရန် - ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၂၂၀ တွင်မဖြစ်ခဲ့ဟုမဆိုလိုပါ။
ငါလအနည်းငယ်လောက်မှာလုံးဝမပျော်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါမှာနာတာရှည်ဆီးကြိတ်ပျော့ပျောင်းနေတယ်၊ ​​ငါရှာဖွေတွေ့ရှိတာကငါသန္ဓေတားဆေး ၃-၄ ပတ်ကြာရင်နောက်ဆုံးမှာငါလုပ်တဲ့အခါမှာဒီသွေးလှည့်ပတ်မှုနာကျင်မှုကိုခံစားရလိမ့်မယ်။ တစ်ခုလုံးယေဘုယျဒေသမှ radiates ။ ဒါကြောင့်ကျွန်မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခြောက်သွေ့တဲ့ကာလရှည်ရှည်စွာနေရပြီးမကြာခဏပြန်လွှတ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှမ porn ။ ထိုအ OK ကိုပါပဲ။
NoFap ဟာငါ့အတွက်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးအချိန်တန်ရင်ငါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတက်တက်ကြွကြွစဉ်းစားသင့်တယ်လို့မခံစားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအချိန်အတော်ကြာမရေးသားခဲ့ဘူး။ ဒီအဆင့်မှာအမြတ်အစွန်းတွေအရမ်းရှင်းတဲ့အတွက်ငါအနိမ့်အမြင့်မှာစတင်ခဲ့သူတွေကိုအားပေးဖို့လိုတယ်။
ငါ၏အ PIED ၏အဓိကပြissuesနာများနှင့် libido မရှိခြင်းအပေါ်တိုးတက်မှု - အများကြီးတိုးတက်မှု။ ငါသုံးရက်ကြာသောအစောပိုင်းအလွန်ကြောက်မက်ဖွယ် flatline ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါငါ့လိင်စိတ်တဖြည်းဖြည်းဖျာမှထ။ ကျွန်ုပ်ဆေးဝါးများသောက်သည့်နေ့ရက်တိုင်း၌ကျွန်ုပ်၏ဂျာနယ်ကိုစောင့်ရှောက်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်မှုဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုနှုန်းကိုသတ်မှတ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်ုပ်သည်“ ကြီးကျယ်သော” ဟုသတ်မှတ်ပြီး ၈ ရက်တာကာလကိုဖြောင့်ခဲ့သည်။ ဒါကနှစ်တွေအတွင်းမှာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ရက်သတ္တပတ်အများစုသည်အချို့သောမြင့်မားပြီးအချို့မှာနိမ့်သော်လည်းအချို့သောလမ်းကြောင်းသည်မှားယွင်းစွာအပြုသဘောဆောင်ပါသည်။
“ စူပါပါဝါ” များအနေနှင့်…ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိလာပြီးပိုမိုယုံကြည်မှုရှိလာပြီးအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သည်။ နောက်ဆုံးဥပမာ (ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်စတင်သည်ဟုထင်ရသည်)
လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ခန့်က MILF နှင့်ဆုံတွေ့ခဲ့သည့်စီးပွားရေးအစည်းအဝေးတွင်ကျွန်ုပ်သည်စားပွဲတစ်လျှောက်၌ရှိခဲ့သည်။ သူမသည်ငါ့ကိုခွဲစိတ်ကြည့်ရှုငါ့ကိုဖမ်းမိခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာပဝါနှင့်ဖုံးလွှမ်းလေ၏။ အစည်းအဝေးပြီးနောက်သူမကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်ပြီး“ သူတို့ကလှတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုငါကြည့်ရတာမယဉ်ကျေးဘူး၊ မင်းငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟုတောင်းပန်ခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာအီးမေးလ်တွေဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်။ ထိုအခါငါသူမ၏ဆဲလ် # တယ်။ ... ဒီမနက်မှာသူမငါ့ကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလည်းလို့မေးတယ်။
TL; DR: NoFap အလုပ်လုပ်တယ်။ အချိန်ကြာတယ် အဲဒါကကျွန်တော့်ဘဝမှာအများဆုံးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကုသပေးနေတယ်။ ၎င်းသည် All-or-nothing အဆိုပြုချက်မဟုတ်သော်လည်းသင်ပိုမိုအကျိုးရှိသည်နှင့်အမျှအကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုမိုလိုက်နာနိုင်လေဖြစ်သည်။ တဖန်သင်တို့မမျှော်လင့်သောအကျိုးကျေးဇူးများရှိလိမ့်မည်။
EDIT: / u / hasknicks အချို့အခြေအနေတွင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုထောက်ပြသည်။ ငါအသက် ၄၀ ကျော်မှာပါ၊ ငါ့ဘ ၀ မှာညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံလွှာတွေအများကြီးကိုကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ NoFap ကိုကြိုးစားဖို့အချက်သုံးချက်ကိုငါရခဲ့တယ် - ငါလိင်စိတ်ဝင်စားမှုကိုစတင်စပြုလာတယ်၊ မိန်းမတွေနဲ့အပျိုစင်ဘ ၀ တွေစပြီးရုန်းကန်နေရတယ်၊ ငါငြီးငွေ့သည့်အခါတိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုကျွန်ုပ်၏အဓိကလမ်းကြောင်းအဖြစ်အမြဲတစေပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသဘောပေါက်လာသည် ဒါကငါ့အစမှတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါသည်လည်း NoFap အတွက်ယေဘုယျပညာ၏အပေါငျးတို့သညျအနညျးဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မဟုတ်ပါဘူးကြောင့်အများစုအကျယ်အထောကျအကူနေစဉ်, ငါအအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းအနီရောင် herring ဖြစ်ကြသည်ထင်ကြောင်းထည့်သွင်းသင့်ပါသည်။ ငါထို့နောက်ငါရပ်တန့်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့ထိုသူတို့ကြိုးစားခဲ့, သူတို့သည်နောက်ခြားနားချက်ဖြစ်စေလမ်းလုပ်သလိုပဲ။
LINK - 220 နေ့ကအစီရင်ခံစာနှင့်တိုးတက်မှုအများကြီး!
ကန ဦး စာပို့ - တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အစီရင်ခံစာ: အဖြစ်အပျက်များနှင့်မရငါမျှော်လင့်ထားသည့်အဘယ်အရာကို။
သည် Periodic PIED နိမ့်လိင်စိတ်နှင့် ပို. ပို. ဖြစ်နိုင် 10 နှစ်များတွင် fapping သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲငါ၏အပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်, အသေးစားနှင့်အအေးများနှင့်ရန်ဘက်ပြုသောသလိုပဲတဲ့လိင်တံ၏လအကြာ။ အံ့သြဖွယ်။ ငါအချိန်အချို့တော်တော်လေးထူးခြားတဲ့အပြောင်းအလဲများကြုံတွေ့။
ပထမနေ့ - ငါမနေ့ကကျောက်ခဲနဲ့ပေါက်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါဟာလိင်ကိစ္စကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့အတွက်ငါ့ကောင်မလေးကိုအိပ်ရာပေါ်မှာလဲလျောင်းထားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါတော်တော်စိတ်ဓာတ်ကျနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမဲ့ငါ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်အနည်းငယ်ရှိခဲ့တယ်။
နေ့ ၂ းတကယ့်အပြောင်းအလဲမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မကုန်နိုင်တော့ဘူး။ ၂ ရက်ပါပဲ။ ရေချိုးခြင်းမပြုမီနံနက်ခင်းမရှိသောကြောင့်အလုပ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဖို့အသင့်ရှိပြီ။
နေ့ 3: Flatline ။ နံနက်ယံ၌ porn = ရှင်းရှင်း flaccid မရှိပါ။ ကြောက်စရာ။ စိတ်ပျက်စရာ။ / r / NoFap Bros အောက်ထစ်ပယ်ငါ့ကိုပြောဆိုပါ။
Day 4: Flatline ကဆက်ပြီး၊ လိင်စိတ်နည်းနေသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ကျတာငါပုံမှန်ထက်စွမ်းအင်နည်းနည်းပဲ။ ငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမရှိ။
Day 5: နံနက်ခင်းသစ်သားဖြင့်အိပ်ရာရှည်ရှည်၊ စွမ်းအင်ကောင်းတယ် Libido သည်ဖျာမှထလာသည်။ ငါအလုပ်မှာအနည်းငယ်ပိုကောင်းအာရုံစူးစိုက်တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များထံသို့ကားမောင်းခြင်းကိုမကြိုက်ပါ။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ရှုပ်စရာမလိုဘဲကန့်လန့်ဖြတ်လိုက်ရုံသာလုပ်ပါသည်။
၆ ရက်နံနက်ခင်းသစ်သား ဒါကောင်းတယ် Kinda ကယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်မှုပေးတယ်။ ထိုအခါငါကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်။ ငါရည်းစားနှင့်အတူပြုချင်သောအရာတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားသောအခါထိုအချိန်နှောင်းပိုင်းတွင်ခေတ္တခဏတစ်ခုခုမီးတောက်သကဲ့သို့ငါအစဉ်အမြဲငါမခံစားရဘူးသောတပ်မက်သောစိတ်နှင့်အလိုဆန္ဒတစ်ခုခံစားရတယ်။ ၎င်းသည်ရှင်းပြရန်ခဲယဉ်းပြီး၎င်းသည်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာတောက်ပနေသော်လည်း၎င်းသည်အမှန်တကယ်လိုလားသည့်အရာကိုငါမှတ်မိသည်။ ည ဦး ယံ၌နောက်ထပ်ကောင်းသောလေ့ကျင့်ခန်း session တစ်ခု။
နေ့ ၇ ရက်နံနက်ခင်းညနေခင်း။ ထိုအစဉ်အမြဲပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့, တစ်နေ့တာအတွင်းထပ်တလဲလဲကြီးမြတ်အလိုအလျောက်စိုက်ထူ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အမြင်တိုးတက်လာသည်။ အတိတ်ကကြောက်လန့်စေမည့်လာမည့်အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်များသည်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါ။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်စိုးရိမ်မှုများသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှင့်ဝေးကွာပါသည်။
ငါ fapping မဖြစ်တာဘယ်လိုတကယ့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုအခုစကြည့်နေပြီ။ ဒါပေမယ့်ဒီလောက်ကြာကြာမနေပါက၊ လူသားသည်ငါအစားအခြားရွေးချယ်စရာအစားထိုစိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
ငါတိုးတက်မှု၏တစ်ပါတ်, ထို့နောက်ရှည်လျား flatline မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်, ပြီးတော့တိုးတက်မှုနှေးကွေး - အစောပိုင်းပျက်ကျမှုနှင့်အတော်လေးအမြန်ပြန်လည်နာလန်ထူမဟုတ်။ ငါထပ်မံစီစဉ်ထားသောလိုင်းများလာမည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်ဟုထင်ရသည် (သေချာသည်မပြီးနိုင်ပါ) သို့သော်ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးဝင်လာသူထဲမှထွက်လာသည်ကိုသိခြင်းကနောက်လာမည့်ဝေးလံသောကြောက်မက်ဖွယ်ရာကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် NoFap ၌ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ထွက်ပေါက်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာစံချိန်တင်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်နိမ်ရပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကထဲကသင်သည် ဝင်. ထက်ပိုကောင်းလာကြ၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ဖြစ်ချင်တယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်။